Sirdoonka Soomaaliya oo ka qeyb qaatay dagaalka TPLF ee Itoobiya | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Sirdoonka Soomaaliya oo ka qeyb qaatay dagaalka TPLF ee Itoobiya
Xog-Sirdoonka Soomaaliya oo ka qeyb qaatay dagaalka TPLF ee Itoobiya.
Saraakiil kamid ah qowmiyadda Tigreega Itoobiya ee dagaalka kula jira dowladda dalkaasi ayaa ku sugan Soomaaliya, si gaar ah ugu xiran Jabhadda TPLF, sida ay ogaatay dowladda Soomaaliya.
Mas’uuliyiin dhinaca amaanka ah ayaa warbaahinta u sheegay in hey’adda Sirdoonka iyo nabad sugidda Qaranka ee NISA, ay heleen xogta saraakiisha TPLF ee gudaha dalka jooga.
Madaxa Mukhaabaraadka sirdoonka Soomaaliya ahna taliyaha dabagalka NISA Korneel Cabdullahi Daahir, oo Cabdullahi Dheere ku magac dheey ayaa si gaar ah isaga iyo saraakiil hoostagta waxay diiradda saareen u kuurgalidda xogta saraakiisha jabhadda TPLF ee Soomaaliya joogta, toosna ugu xiran kooxda dagaalka ka wada dalkaasi.
Ilo wareedyo lagu kalsoonyahay ayaa soo wariyay in Korneel Cabdullahi uu helay dekumentiyo qoraal ah oo Saraakiisha TPLF ee Soomaaliya joogta direen iyo codadka xiriiro ay la sameeyeen kuwooda dagaalka kula jira xukuumadda uu hogaamiyo R/W Abiy Ahmed.
Xubnaha Tigreega ee xogtooda ay heleen sirdoonka Soomaaliya ayaa ku sugan dalka gaar ahaan qeybo kamid ah gobolada Bay iyo Gedo, iyadoo suurto gal ay tahay in arintan ay keento tilaabo laga qaado saraakiishaasi.
Ciidamo ka socda dowladda Itoobiya ayaa sanado badan ku sugan Soomaaliya iyaga oo kamid ah howlgalka Amisom, balse dhinaca kale in howlgalkaasi uu saameyn ku yeesho dagaalka Itoobiya ayaa ah mid keeni karta xaalad kale sida ay qabaan quburada dhinaca amaanka ah.
Korneel Cabdullahi Dheere oo kamid ah xubnaha ugu awoodda iyo dhaq dhaqaaqa badan sirdoonka Soomaaliya sanadihii u danbeeyay, ayaa si gaar ah la sheegay inuu uga hortagayo falal ay gudaha Soomaaliya ka sameeyaan kooxda TPLF ee dagaalka kula jira dowladda Itoobiya,
Saraakiil ka gaabsaday in magacooda la adeegsado una dhaw Korneel Cabdullahi Dheere ayaa tilmaamay in Taliyaha dabagalka uu tagay qaar kamid ah xeryaha ciidamada Itoobiya ee gudaha Soomaaliya, balse lama oga haduu jiro xiriir toos ah oo NISA iyo Taliska Abiy Ahmed ka dhaxeeya.
Wararka qaar waxay sheegayaan in saraakiisha la ogaaday in ay kooxda TPLF ka tirsanyihiin iyagoo jooga Soomaaliya, ay suurto gal tahay in shaqada laga joojiyo, lana ciqaabo, waxaana Korneel Cabdullahi la ogyahay inuu xiriir adag la leeyahay sirdoonada caalamka sida CIA-da maraykanka iyo dowlado kale.
Dagaalka ka socda dalka Itoobiya ee jabhadda TPLF kula jirto dowladda ayaa maalmihii u danbeeyay aad usii xoogeystay, waxaana ku biiray oo safka hore ee dagaalka jooga Abiy Ahmed, saacidii u danbeeyayna waxaa uu sheegay in ay ka adkaadeen kooxda dagaalka kula jirta.